Minisitry ny Fanabeazana: “Tsy hisy taona fotsy ho an’ny fanadinam-panjakana” | NewsMada
Minisitry ny Fanabeazana: “Tsy hisy taona fotsy ho an’ny fanadinam-panjakana”
“Holazaina ho fantatry ny daholobe ihany raha misy ny fanovana momba ny tetiandron’ny fanadinana ofisialy”, hoy ny minisitra mpiahy.
“Tsy hisy ny taona fotsy ho an’ny mpanala fanadinam-panjakana, amin’ity taona ity”, hoy ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Andriamanana Rijasoa, omaly teny Anosy. Misy vaomiera manokana mandinika ny famolavolana ny fanadinana. Mbola miandry ny toromarika avy any amin’izy ireo vao afaka manambara fa hahemotra na tsia ny tetiandron’ny fanadinana. Momba ny famerenana ny mpianatra rehetra an-dakilasy, mila fiaraha-midinika amin’ny minisitera maromaro ny fahafahana manao izany satria zavatra maro no voakasika : ny fahasalamana, ny fitaterana…
Nosantarina, omaly teny amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena Anosy, ny fizarana ny taratasy fifanarahana momba ny asa ho an’ireo mpampianatra Fram voaray ho mpiasam-panjakana ho an’ny faritra (Drentep) Analamanga. 374 no nahazo izany fa ny 74 nandray ny fifanarahana omaly ary hitohy amin’ny Cisco hafa. Niasa hatrany ny minisiteran’ny Fanabeazana namita ireo antontan-taratasy nahafahana namoaka ny taratasy fifanarahana momba ny asa, hoy ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena. Nitombo 4 000 ny isan’ny mpampianatra tafiditra ho mpiasam-panjakana ary hisy 8 000 vaovao horaisina, araka ny nambarany ihany.
Nanamarika ny governoran’ny faritra Analamanga, Rasoamaromaka Hery fa tokony hojerena manokana ny mpampianatra, indrindra amin’ny fanomezana prime toy ny azon’ny mpiasam-panjakana amin’ny minisitera sasany. Ny vola atokana ho an’ny fanabeazana rahateo mila ampitomboina.